“Jalmad Shaah ah iyo Bakeeriyo Deyn ah Ayaan ku Billaabay Maantana Waxaan Leeyahay Hanti Badan” | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sideed u Hanan Kartaa Shaqaalahaaga |Tukesomalism.com
Ku Dadaal Inaad Sameyso Jir Dhisi
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 12, 2016
Qiimaha iyo Faa’idooyinka Cadayga
Ilhaan Ciise Maxamed, December 2, 2018
BBC Somali — July 21, 2019
Haween badan oo Soomaali ah ayaa nolol maalmeedka qoysaskooda kasoo saara ganacsiyo kala duwan oo ay dadaal adag ku bixiyaan, laakiin qaarkood qisooyinkooda waa kuwo cajiib ah oo soo jiita inta badan dadka.
“Hadda dadka ay noloshooda igu tiirsan tahay waxay marayaan 20 ruux, qaar anigaa dhalay qaarna iyagaa sii dhalay, kuwo kalena waa ehelka xaafadeyda ku nool ee wax barta, wax walba oo ku baxa dadkaas waxaan ka maareeyaa meheradeyda”.
Hooyo Xaliima-sacda Macallin Cabdinuur, waa haweeney Soomaali ah oo meherad ganacsi ku leh magaalada Qabridahar ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya, waxayna soo martay marxalado kala duwan, walina way sii wadaa howsheeda.
Meheraddeeda waxaa laga cabaa shaaha iyo cabitaannada kaleba, waxayna dhaqaalaha kasoo xarooda ku maareysaa qoyskeeda baaxadda leh iyo ehellada la noolba.
Ganacsigeedu hadda wuu ballaaran yahay, laakiin ma aha mid si fudud ay dhidibbada ugu aastay.
“11 sano kahor, ganacsigaan waxaan ka billaabay shaah karin, markaasna waxaan haystay 7 carruur ah, falaasyada, gambadhada iyo bakeeriyaashaba waan soo amaahday, maalinkaan shaqada billaabayay, waxaan dagay meel kiro ah”, ayey tiri Xaliima-Sacda.
Iyadoo sheekadeeda sii wadata ayey sharraxday wixii u qabsoomay 11 sano ka dib.
“Intaas waa biilka reerka, waxaa kale oo aan ganacsigan ka dhistay guryo shan qol ah, illaa iyo haddana ganacsiga halkiisii ayaan kasii wadayaa. Shaahii baan kariyaa cabitaanno kalena waan ku dhex wadaa, lacagta aan isticmaalo mooyee inta kale waxaan kusii galaa hagbad, si aan ugu fuliyo howlaheyga kale”.
‘Waxaan rabaa inaan soo xajiyo’
Hammiga ay ganacsigan Xaliima ka leedahay kuma koobna biilka reerka iyo hoyga oo kaliya, balse waxay xitaa damacsan tahay inay heer intaas ka weyn kasii gaarto.
“Ciyaalkii way ii koreen, hadda wixii ka dambeeya waxaan rabaa inaan ku cibaadeysto xooggeyga, inaan xaramka ku aado, waxaanna doonayaa inaan hadda sii aruursado kharashkii aan xajka ku aadi lahaa”, ayey tiri, iyadoo ay kalsooni weyn ka muuqatay.
Waxay sheegtay in meheraddan ay kasoo caana maashay, meel kalena aysan waligeed caawinaad ka helin.
Mar ay arrintaas ka hadleysay ayey sheegtay: “Wax aniga reerkeyga dhankooda iga soo galay iyo wax ciyaalkeyga xaggooda iga soo galay midna ma jiro, kirligaas oo aan ku shaqeystay, xooggeyga oo aan aaminay iyo Ilaah oo aan talo saartay ayaan heerkan ku gaaray”.
Xaliima-Sacda waxaa u suurta gashay inay saddex meherad sameyso, mid iyada ayaa ku ganacsata, halka labada kalena ay dad kale ka kireysay.
Laakiin sannadihii hore ee ganacsigeeda xaalku sidaas wuu ka duwanaa, waxayna tiri: “shan sano oo ka mid ah 11-kaa sano ee aan ganacsiga ku jiray, waxaan dagganaa goob kiro ah, laakiin markii dambe aniga ayaa gurigeyga dhistay wuxuuna ii noqday meel istiraatiiji ah oo ay dadkoo dhan jecel yihiin”.
Hooyadan ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay nolosheeda, maadaama ay hadda tahay qof caan ka dhex ah bulshada oo cid walba ay taqaanno, dadkuna ay meheraddeeda isku ballansadaan.
Tags: "Jalmad Shaah ah iyo Bakeeriyo Deyn ah Ayaan ku Billaabay Maantana Waxaan Leeyahay Hanti Badan"
Next post YouTube Ayaa Dadka ku Caawinaya Aragtida ah in Dunidu Tahay Mid Fidsan, Sida Lagu Sheegay Cilmi-baaris
Previous post Go’aan Qaadasho Wanaagsan